ပါဝင်ရန် - KT Care Foundation
KT Care သည် စေတနာဝန်ထမ်းများ၏ ပ့ံပိုးမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်းအား အပြောင်းအလဲများ လုပ်ခွင့်ရရန် ကူညီမှုများ ပေးခြင်းကို ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါသည်။
သင့်အနေနဲ့ KTCare တွင် နေရာမျိုးစုံမှနေပြီး စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အောက်ပါနည်းလမ်းများ အပါအဝင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပါ၀င်ကူညီပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုးသုံးပြီး KT Care ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းကောင်း ပါးပေးခြင်း (facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဝေငှပေးခြင်း…..စသည်ဖြင့်)။
KT Care စီမံချက်များ၊ အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် ရပ်ရွာဒေသများတွင် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးခြင်း၊ လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
KT Care ဖေါင်ဒေးရှင်းတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက သင့်အလုပ်လျှောက်လွှာနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုများကို info@ktcare.org သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Here areafew links that might give youafew crazy ideas forafundraisng activity!
If you are interested in volunteering with KT Care Foundation, please email your CV and areas of interest to info@ktcare.org.
သင်သည် ကျောင်းသား သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရပြီးသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသလား။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း နယ်ပယ်များတွင် အတွေ့အကြုံ ရယူလိုပါသလား။ KT Care ဖောင်ဒေးရှင်းတွင် အလုပ်သင်အဖြစ်လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက အီးမေးလ်ဖြင့် info@ktcare.org သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
KT Care သည်အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်ပြု လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားပါသည်။
ကျွနု်ပ််တို့အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ရပ်ရွာကောင်းကျိုးအတွက် ပူးပေါင်းထည့်ဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အမြတ်အစွန်းမယူသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အေဂျင်စီများနှင့် မိတ်ဖက်ပြုလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေနေပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ ၏ တန်ဖိုးထားမှုများကို မျှဝေတန်ဖိုးထားနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်သော လူ့ဘောင်တစ်ခုကို ရေရှည်တည်တ့့ံသော တိုးတက်မှုမျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော မည်သည့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မဆို ပူးပေါင်းဆာင်ရွက်ရန် လိုလားပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ဒေသခံ များ၏လိုအပ်မှုများပေါ်တွင် မူတည်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အမျိူးအစား နှင့် ပမာဏ အမျိူးမျိူး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေး နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာများ ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများ
သင်၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာသည် ဒေသခံများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရာတွင် အများဆုံးအထောက်အကူပေးပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းမှ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို လက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါသည်။ ကျွနု်ပ််တို့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များအတွက် နည်းပညာပိုင်း ပံ့ပိုးမှု နှင့် အကြံပြုခြင်းများကို လိုလားပါသည်။
KT Care ဖေါင်ဒေးရှင်းတွင် မိတ်ဖက်ပြုလက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက အီးမေးလ်ဖြင့် info@ktcare.org သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
If you are interested in exploringapartnership with KT Care, please contact us at info@ktcare.org. Thank you for your interest .
KT Care သည် ရပ်ရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ အတွက် နှစ်မြုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော အရည်အသွေးစုံလင်သူများ ပါ၀င်သည့် အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ (“ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း” link ကိုကြည့်ပါ။)
သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို သိမ်းဆည်းထားစေလိုပါက အီးမေးလ်ဖြင့် info@ktcare.org သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။